Filannoo Naayjeeriyaa: Muhaammaduu Buhaarii sagalee ummataan perezidaantii biyyattii angoo irraa buusan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Filannoo Naayjeeriyaa: Muhaammaduu Buhaarii sagalee ummataan perezidaantii biyyattii angoo irraa buusan
Sagaleen ummataa naannolee 34 beekameera. Isa naannoolee 2 qofatu hafa
Filannoo Naayjeeriyaatti sanbata dabre geggeeffameen Muhaammaduu Buhaarii perezidaantii biyyattii irratti injifannoo guddaa gonfachuun isaa gabaafame. Akka bu’aa filannoo boordiib finannoo biyyattii ifa godhetti bakka bu’aa paartii mormituu All Progressives Congress (APC) kan ta’e jeneraal Muhaammaduu Buhaarii sagalee miliyoon 15.4 argachuun injifate. Sagaleen miliyoona 13.3 perezidaantiin biyyattii Goodluck Jonathan argate masaraafi taayitaa dabarsee laatuu irraa kan isa hanbisu hintaane.
Jalqabaa kaasee APC fi Muhaammaduu Buhaarii filannoo bara kanaa akka injifataniidha kan tilmaamamaa ture. Haata’uu malee, hedduu taajjabdootaatti Jeneraal Buhaariin sagalee ummataa hagana gayuun ykn addaaddummaa hagana bal’aa ta’een injifata jedhee kan yaade hinturre.
Muhaammaduu Buhaarii jeneeraala kan tureefi kana durasa fonqolchaan biyyattii qabatee Naayjeeriyaa bara 1983 hanag 1985 itti bulchaa nama tureedha. Amma garuu, sirna dimokraasii fudhachuun rakkina biyyattii keessatti bal’inaan mul’atan, keesummaayyuu rakkina siyaasaa, gurguddoo kanniin akka malaammaltummaa, dhabamiinsa sirna bulchiinsa gaariifi Bokoo Haraam irratti tankaarfii cimaa fudhachuu imaamata godhateet kan filannotti seene.
‘Sababni perezidaantichiniifi paartiin isaa injifatameef heddu ta’un nimala. Inni guddichi garuu filannoon kuni hatamuu dhabuu isaati,’ jechuun Antony Goldman reuters itti hime.
Kana dura boordiin filannoo biyyattii guyyaa filannoo kana torbaan jahaan gara boodaatti harkisuun mooraa mormituu keessatti mormii heddu kaasee ture. Kanniin xiinxala siyaasa irratti bobba’anis sodaafi shakkii mootummaan angoo dabarsee kennuuf qophii dhabutu kana uume jedhutti isaan geessee ture.
Boordiin Filannoo Naayjeeriyaa kanniin mooraa mormitootaa keessa jiraniif looguu hinoolle komiin jedhu gara paartii biyya bulchuu PDP irraa dhagayamuu eegaleera. Paartiin biyya bulchaa jiru, itti dabaluudhaanis, bu’aan filannoo naannolee torbaa akka haqamuuf gaafateera.
Paartiin Naayjeeriyaa bulchu, PDPn, bara 1999 kaasee angoo irra jira. Injifannoon Muhaammaduu Buhaarii, perezidaantii haarawa qofa osoo hintaane paartiin haarawa biyya bulchus gara taaytaattii akka dhufu godha jechuudha.
filannoo naayjeeriyaa 2015
Previous articleGanzabee Dibaabaa fiigicha m5000 Carlsbad itti geggeeffame injifatte
Next articleFiilmiin Ajaa’iba jedhamu magaalota Amerikaatti daawwannaaf dhiyaatuuf